Ngabe usethole impendulo yemikhuleko yakhe kuMundele umqeqeshi we-Orlando Pirates? - Impempe
Ngabe usethole impendulo yemikhuleko yakhe kuMundele umqeqeshi we-Orlando Pirates?
February 19, 2021 February 19, 2021 Impempe.com
UJean-Marc Mundele we-Orlando Pirates
Kufanele ukuba into abeyithandazela umqeqeshi we-Orlando Pirates, uJosef Zinnbauer wukuthola umgadli ozoqobela enethini amathuba amahle akhandwa yiqembu lakhe emidlalweni yalo.
UZinnbauer wayeyiqale kahle isizini abagadli bakhe oZakhele Lepasa noTshegofatso Mabasa bewenza kahle umsebenzi wabo ngesikhathi uGabadinho Mhango eselashwa kulandela ukulimala.
Kodwa nabo laba bagadli babe sebelimala, bashiya lo mqeqeshi waseGermany exakekile ngokuthi uzowashayelwa ngubani amagoli.
Iqembu lidonse kanzima ezama ngabadlali basesiswini oVincent Pule, Deon Hotto, Terrence Dzvukamanja noThembinkosi Lorch kodwa kwacaca ukuthi akulungi kahle.
Uze wazama nokubuyisa uMhango engakalulami ngokugcwele, kodwa kwacaca ukuthi akulona iqhinga elihle lelo njengoba lo mgadli waseMalawi ebehluleka ukwenza into abeyenza ngesizini edlule.
Yingakho kumjabulise kakhulu ukuthi umgadli wakhe okunguyena yedwa oseluleme ngokugcwele, uJean-Marc Mundele abambolekwe yi-AS Vita Club yaseCongo DR ashaye igoli lakhe lokuqala kwiBucs ngempelasonto edlule.
UMundele ungene ngesiwombe sesibili emdlalweni weBucs kwiCAF Confederation Cup ebibhekene kuwo neJwaneng Galaxy yaseBotswana washaya igoli kungakapheli sikhathi esitheni bewina ngo 3-0.
“UMundele ukorile kanti lokho kuhlezi kuyinto enhle kumgadli ngoba kuvuselela ukuzethemba kuye,” kusho uZinnbauer.
“Isimo sakhe sokulungela ukudlala nokujwayela indlela yethu yokudlala yinto esiyidingayo, sesiqalile ukukubona ejimini ukuthi sekukahle.
“Usesikhombisa izimpawu zokuthi usekulungele ukudlala – ube nomdlalo omuhle wabuye washaya ngegoli okuyinto ebalulekile nedingekayo eqenjini njengamanje,” kubeka uZinnbauer.
Njengoba sebehamba phambili ngo 3-0 emdlalweni wabo wokuhlunga kwiComfederation Cup, uZinnbauer kungenzeka aphumuze abanye bababadlali bakhe ngeSonto uma sebedlala umlenze wesibili neGalaxy e-Orlando Stadium.
UMundele ngomunye wokubhekwe ukuthi bazonikwa ithuba lokuwuqala lo mdlalo ukuze abonakale ukuthi usekulungele ngampela yini ukuthwala ijoka lokutholela eziMnyama amagoli.
“Sinomdlalo ngeSonto ngakho kumele sibheke ukuthi kwenzakalani kubadlali, sibone ukuthi yibaphi abadinga ikhefu nokuthi bangaki abakulungele ukudlala. Nokho akulula ngoba ngumdlalo onzima, umdlalo okhethekile,” kuchaza yena.
“Impela sishaye amagoli amathathu, kodwa ebholeni kungenzeka noma yini ngakho kumele siqaphele. Ngicabanga ukuthi ukungangenelwa goli, bese ukora wena yinto ebalulekile emidlalweni yeCAF, ikakhulukazi uma udlala ekuhambeni.”
Previous Previous post: Sekusolwa itulo lokulwa namaqembu akuleli ngenxa kaPatrice Motsepe nokhetho lweCAF
Next Next post: Ivuswe yinduku emaqandeni iSuperSport United